Kanzuru yeMutare Yodzikisa Mimwe Mitero Yayaimbenge Yakwidzwa
Blessing Tandi - Mutare Mayor
Kanzuru yeguta reMutare inoti yadzikisa mimwe mitero yayakange yakwidza zvichitevera zvichemo zvakabva kuvagari vemuguta iri.
Meya weguta reMutare, VaBlessing Tandi, vaudza Studio7 kuti kanzuru yavo yakagara pasi ikabvumirana kuti ideredze mimwe mitero nekuda kwekuchema chema kwakaitwa nevagari.
VaTandi vati vainge vakwidza mitero iyi zvichienderana nekukwira kuri kuita zvinhu munyika uye kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avanotarisirwa kuita nemazvo.
“Mukazvitarisa izvezvi tiri kuda kuti tibharanzise zvinhu zvedu uye kuti tirambe tichipa service asiwo takaonawo kuti kuchemawo kwavo ngatigadzirisewo ipapo, asiwo muchionawo kuti taida kuramba tichipa a service kuvagari asi zvakazoita zvonge tave kudhurisira vagari vacho saka takabva taderedzawo asi kunewo nhubu dziri kutora mukana wemvura yedu yakachipa kuita zvisina kunaka,” vadaro VaTandi.
VaTandi vati kunze kwemvura yaderedzwa mutengo, zvimwe zvaderedzwa imari inobhadharwa kuchipatara, mari yedzimba dzekanzuru kuitira kurerutsira vagari.
Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuru uye vari mukuru anoona nezvehutano mukanzuru makare, Dr Antony Mutara, vati kanzuru yakange yatora danho rekuwedzera mari yemvura senzira yekuda kumisa tsika iri kuitwa nevamwe vagari var ikutengesera vamwe mvura kunzvimbo kwaisiri kuwanikwa.
“Tiri kuona kuti vamwe vagari vari kushandisa mvura neimwe nzira yatisingafungidziri nehuwandu hwemhuri dzavo uyezve unotofunga kuti vanhu ava vari kutotengesa mvura yacho kune vasiri kuiwana sekwakaita sekuDangamvura, sakatakafunga kuti tikaiwedzera mutengo zvinopa kuti vashandise mvura zvine mwero zvakare tinoda kunge tichiwedzera mvura inopinda muguta kuti ikwanire vanhu vose,” vadaro Dr Mutara.
Kanzuru yeMutare yaderedza zvakare mari yemitero yekuchipatara.
Vanhu vakuru vaisungirwa kutanga kubvisa madhora mashanu vave kubvisa madhora matatu, vadiki vachibvisa madhora maviri. Mari yedzimba dzekanzuru iyo yainge yawedzerwa yaderedzwa zvakare nemadhora mazana maviri.
Kuderedzwa kwemitero yekanzuru uku kwatambirwa nemufaro nevamwe vagari avo vakurudzira kuti kanzuru itange yataura navo isati yatora matanho akaita sekuwedzera mari dzemitero.
Mumwe wevagari ava, VaDouglas Masekesa, vati kanzuru inofanira kucherechedza zvichemo zvevakwegura pamwe nevanoshaya pakutara kwayo mari dzemitero.
Mumwe mugari wekuDestiny, VaTulani Tiziwani, vati kanzuru inofanirwa kubatikana nekuchengetedza mvura iri kurasika zuva nezuva mumisha yakaita seSakubva nedzimwe nzvimbo.
Kanzuru yeMutare inoti ichapota ichionesana nevagari mukufamba kwenguva kuti mitero ichange ichizokwidzwa zvakadii pakupera kwemwedzi mina yega yega.